Fanadihadiana: Ampio hanatsara ny serivisy GNUTransfer | Avy amin'ny Linux
Fanadihadiana: Ampio hatsaraina ny serivisy GNUTransfer
Fa toy ny hoe omaly, fa efa nampiasainay GNUTransfer Amin'ny maha-mpamatsy fampiantranoana anay roa taona mahery taorian'ny nandaozana ny Hostgator, ary tokony holazaiko fa tsy afaka ny ho faly kokoa amin'izany fanapahan-kevitra izany isika. Ny tsara indrindra dia manana Fanohanana amin'ny teny Espaniôla isika ary eo ho eo, zavatra izay tsy nananantsika tamin'ireo orinasa teo aloha.
Tombony hafa ananany GNUTransfer dia ny Control Panel anao manokana hitantanana ireo mpizara, antsoina VPS Control, izay manana menio mitete-midina miaraka amin'ny enina amin'ireo fizarana GNU / Linux malaza sy ampiasaina indrindra: Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora, OpenSuSE y Slackware hametraka azy ireo ao amin'ny VPS anay.
Amin'ny fametrahana voalohany dia azonao atao ny mamela ny fanamboarana default, izay misy partition swap ary iray hafa ho an'ny rafitra, na manamboatra fametrahana mandroso ary mamorona teboka tendrena manome habe mety. Ny tontonana dia manana fanohanana ny rafitra ext3, ext4, ary ReiserFS. Ampidirinay tsy tapaka ny fanatsarana sy ny fampandehanana an'ity tontonana fitantanan-draharaha ity izay tafiditra ao anatin'ireo mpizara virtoaly misy anay.
GNUTransfer te-ho tsara kokoa
Saingy tsy te-ho "tsara" fotsiny ireto ankizy ireto fa te ho "tsara indrindra" ary mila ny fanampiantsika mba hahatongavana any. Tsy mila mandoa na inona na inona isika, na manome na zavatra mitovy amin'izany, mila 5 minitra amin'ny fotoanantsika fotsiny isika vao hamaly ny fanadihadiana ataon'izy ireo.
Jereo ny fanadihadiana
Na dia avy any Arzantina aza ireo mpamorona ny GNUTransfer, dia manolotra mpizara virtoaly Xen miorina any Atlanta izy ireo ary amin'izao andro izao dia misy fanadihadiana natao hanombanana ny fahalianana ankehitriny amin'ny lozisialy VPS linux. Ho an'ity dia raisin'izy ireo ho referansa ny drafitra miavaka indrindra izay misy:
RAM: 4GB (natokana tsy zaraina)
Kapila mafy: 80GB (Hardware RAID 10)
Fifamoivoizana isam-bolana 1000 GB
Fidirana root SSH
Panel Web Remote Control
(vidiny ifotony: US $ 300 / taona - vidin'ny vinavina: US $ 250 / taona)
Ny valin'ny fanadihadiana dia hanampy ireo tovolahy ao amin'ny GNUTransfer hanolotra serivisy tsara kokoa, miaraka amin'ny vidiny tsara kokoa ary hamantatra mialoha ny tena fahalianana amin'ny fampiasana mpizara VPS amin'ny fotoana izay mihabe ny vahaolana CLOUD.
Mandraisa anjara amin'ny fanadihadiana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » hafa » Fanadihadiana: Ampio hatsaraina ny serivisy GNUTransfer
Raphael Castro dia hoy izy:
Lazao fotsiny fa sarotra be ho an'ny olona mivarotra VPS anao ny manome antoka fa tsy hozaraina ny RAM-nao.
Raha tsy izany dia faly aho fa mahomby amin'ny GNUTransfer
Valiny tamin'i Rafael Castro
Azoko tsara ny filan'ny famatsiam-bola, fa ny mpampiasa tsotra kosa tsy mila mpizara. Eny, angamba mieritreritra izany momba ny tranonkala iray aho. Amin'ny ankapobeny, tsia.
Ny fanontaniana dia tena amerikanina ary mivantana, jereo fotsiny raha te-handray mpizara virtoaly ianao, tena tsy miankina ary mieritreritra ny ho avy. Fehiny, fangatahana fanontaniana feno herisetra.
Tena tsara angamba izy ireo, tsy fantatro izy ireo, fa mila fanontaniana amin'ny hatsaram-panahy kely izy ireo. Ho an'ny robot Hal9000.
Na izany aza, hojereko izy ireo sao tsara.
Azafady, avelao ireo domains hivarotra azy amin'ny dolara.
Manangona MC avy amin'ny loharanom-baovao miaraka amin'ny fanohanana samba